လိမ်ညာတတ်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လိမ်ညာတတ်သူ
Posted by ဆုမြတ်မိုး on Oct 22, 2013 in Creative Writing |9comments
“”တနယ်ချင်းလို့ ပေါ ဘေမဲ့ ခိုး ချိ ရ ဒူ လေး ချိဘူးဒယ်။””
အဲလို သီချင်းကို မဆိုမိပဲ………………………….
“”တနယ်ချင်းကို ရည်းစားမလုပ်ဖို့ ဘယ်သူတွေ စပြောခဲ့လဲ။ နင် လမ်းမှာ ချနင်းဖို့ အတွက် ငါ့ ဘဝကို ပုံပေးခဲ့တယ်…”
“””နင့် ရည်းစား ပထမတစ်ယောက်ကို ဒုက္ခပေးတာ ငါ ပါပဲ။
နင့် ရီးစား ဒုတိယ တစ်ယောက်ကို ဂုံးတိုက်တာလည်း ငါပါပဲ။
နင့် ရီးစား တတိယ တစ်ယောက်ကို ရန်ရှာတာလည်း ငါပါပဲ”””
ဂလို သီချင်းမျိုးကိုပဲ ဆိုပြီး လိုချင်တာကို ရအောင် သာယူပစ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ အဖြူရောင်မုသား က မသုံးမဖြစ်သုံးရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိတတ်တာပေ့ါနော် …
အင်းး ဘယ်လို ပြောရမလဲ …
သူငယ်ချင်းနဲ့ ချစ်သူ …
သူငယ်ချင်းလို ချစ်သူ ……..
ယောကျာ်းလေး နဲ့ မိန်းကလေး
သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါ. . . . . , .
လက်တွေ့ လောက ဆီက
ရောက်ရှိလာတဲ့ ရသ လေးပေါ့
သူငယ်ချင်းကို သူငယ်ချင်းထက်ပိုလို့ သူငယ်ချင်းထက်ပိုဖို့ ဖွင့်ပြောမိတဲ့အခါ သုငယ်ချင်းကပြန်ပြီးပြောတယ် သူငယ်ချင်းလိုဘဲခင်ချင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ်မို့ သူငယ်ချင်းလိုဘဲနေသွားကြတာ အခုထိလည်း သူငယ်ချင်းပါဘဲလေ။
ငယ်ငယ်ထဲက မိန်းကလေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းမဖြစ်ခဲ့လို့ပဲ…